ေအာင္လအန္ဆန္ နာမည္ မႀကီးခင္က ဒီလိုေတြ အႏိုင္က်င့္ခံရတယ္ ဆိုတာ သင္သိပါသလား …. – Let Pan Daily
ေအာင္လအန္ဆန္း ဟာ သူ႔ထက္ ဝိတ္တန္းႀကီး သူေတြ အရပ္အေမာင္း ကိုယ္လုံး ကိုယ္ေပါက္ ႀကီးမား သန္မာသူေတြကို လုံးဝ ေၾကာက္႐ြံ ထိတ္လန႔္မႈမရွိဘဲ ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ ထိုးသတ္ၿပီး ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ေတြကို ရရွိ ကာကြယ္ႏိုင္တာပါ။
ေအာင္လအန္ဆန္ ဒီလို ႏိုင္ငံျခားသားေတြ နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ ခဲ့ရတဲ့ ၿပီး ေအာင္ပြဲေတြရရွိခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ ရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို အထင္မႀကီးဖို႔ နဲ႔ မိမိကိုယ္ကို အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားၿပီး အခ်ိန္ေပး အားထုတ္မယ္ ဆိုရင္ ဘာမဆို ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ကို ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ သူနာမည္ မႀကီးခင္ ကတည္းက သူ႔အေပၚ ေထာက္ပံ့မႈေတြေပး ခ်စ္ေပးခဲ့တဲ့ သူ႔ဇနီးကို အရမ္းခ်စ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔သားေလးဟာလည္း ထိုးတာကန္တာေတြ ဝါသနာပါတဲ့ အေၾကာင္းကိုပါ ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္…ဒီအေၾကာင္းေတြကို အင္တာဗ်ဴးထားတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္း ဗီဒီယိုေလးကို ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ေအာက္မွာ ျပန္လည္မွ်ေဝေပး ထားပါတယ္။
အောင်လအန်ဆန် နာမည် မကြီးခင်က ဒီလိုတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရတယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား ….
အောင်လအန်ဆန်း ဟာ သူ့ထက် ဝိတ်တန်းကြီး သူတွေ အရပ်အမောင်း ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် ကြီးမား သန်မာသူတွေကို လုံးဝ ကြောက်ရွံ ထိတ်လန့်မှုမရှိဘဲ ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင် ထိုးသတ်ပြီး ချန်ပီယံ ခါးပတ်တွေကို ရရှိ ကာကွယ်နိုင်တာပါ။
အောင်လအန်ဆန် ဒီလို နိုင်ငံခြားသားတွေ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ် ခဲ့ရတဲ့ ပြီး အောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အောင်လအန်ဆန်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ ရာမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အထင်မကြီးဖို့ နဲ့ မိမိကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး အချိန်ပေး အားထုတ်မယ် ဆိုရင် ဘာမဆို အောင်မြင်နိုင်တဲ့ အကြောင်း ကို ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူနာမည် မကြီးခင် ကတည်းက သူ့အပေါ် ထောက်ပံ့မှုတွေပေး ချစ်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ဇနီးကို အရမ်းချစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ သူ့သားလေးဟာလည်း ထိုးတာကန်တာတွေ ဝါသနာပါတဲ့ အကြောင်းကိုပါ ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်…ဒီအကြောင်းတွေကို အင်တာဗျူးထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်တွေ အတွက် အောက်မှာ ပြန်လည်မျှဝေပေး ထားပါတယ်။
ပြည်သူ တွေ အတွက် ဝမ်းသာစရာ သတင်းပြောလိုက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး